सोमबार, २० मङि्सर २०७८, ०५ : २३
अन्तरिक्षमा केटी चाहियो !
यी हुन् जापानका फेसन डिजाइनर युसाकु मियाजावा। उनी फेसनबाटै अर्बपति भएका हुन्। उनको सपना छ, ‘कुनै दिन अन्तरिक्षमा डुल्ने !’
प्लेन चढ्नुअघि गर्भाधान परीक्षण !
हङकङको विमानस्थलमा मिदोरी निशिदा प्लेन चढ्न ठिक्क परेकी थिइन्। उनलाई बाहिरै सोधिएको थियो, ‘तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ ?’
स्कुल नजाँदै पिकासो बन्ने तयारी
जर्मनीका माइकल एकर भर्खर सात वर्षका भए। स्कुले शिक्षा शुरु भएको पनि छैन, उनको प्रतिभाका कारण सारा जर्मन चकित हुन थालेका छन्।
५ सय वर्ष पुरानो सुनको बिस्कुट
सन् १९८१ मा मेक्सिको सिटी पार्कमा लगभग दुई किलोग्रामको सुनको बिस्कुट निकै भेटिएको थियो। त्यसको संरक्षण र अध्ययनमा जुटेको वैज्ञानिकहरुको समूहले सो सुनको बिस्कुट पाँच सय वर्ष पुरानो भएको र स्पेनीहरुले पाँच सय वर्षअघि लुटेको निष्कर्ष निकालेका छन्।